လြော့ကွိုးကုနျခြိနျ စိုငျးထီဆိုငျ mp3 indir, Yükle, mp3 download
Bedava Mp3 indir, Mp3 Dinle, Cepten Mp3 Müzik indir, Ücretsiz Şarkı İndir
Bedava Mp3 Indir, Dinle . Yerli Yabancı Şarkıları Mp3 Olarka Indir, Ücretsiz Ve Limitsiz mp3 indire bilirsinzi.
လြော့ကွိုးကုနျခြိနျ စိုငျးထီဆိုငျ | mp3 indir
ည၀င်္ကပါ ဆို အောင်ထက် V1::မှိုင်းဝေအုံ့ဆိုင်းတဲ့ညတွေအလယ် အထီးကျန်ဆန်ခဲ့တဲ့ငါ့နယ်ပယ် ရှေ့ကိုဆက်တိုးလည်းပိတ်ဆို့ဆဲ လမ်းတွေရှိတယ် ကျင်လည်ရာ လောက ကချေသည် အမှောင်ယံနဲ့အမြဲတမ်းတွဲနေတယ် ဒီဘ၀ရဲ့အလယ် မျှော်လင့်ခြင်းမင်းရဲ့ရောင်စ (4.98)
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များမှ အခြေခံပညာလယ် ထက်အဆင့် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ကျင်းပ (3.43)
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ ပြင်းအား ၈ ၂ အဆင့်ရှိ ငလျှင်လှုပ်ခတ်မှု လူ ၁၆ ဦးထက် မနည်းသေဆုံး (1.11)
မြောက်ကိုးရီးယားအပေါ် ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ခတ်မှုတွေ တိုးချမှတ်ဖို့ ကန်ပြင်ဆင် (4.82)
ရခိုင်အခြေအနေပေါ် နိုင်ငံတကာတုံ့ပြန်ချက် အပြင်းအထန်ဆက်ရှိနေ (2.39)
မန်ချက်စတာဗုံးကွဲမှု ဆက်နွယ်ပြီး နောက်ထပ်၃ဦး ဖမ်းဆီး (1.25)
ဘာသာရေးချုပ်ချယ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပေမဲ့ မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေး ကန်ထပ်ပြောင်းဖွယ်မရှိ (3.98)
ကိုဖီအာနန်ကော်မရှင် အကြံပြုချက်တွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ပါ့မလား (6.67)
ထူးအိမ်​သင်​ နာရီ​ပေါ်မှမျက်​ရည်​စက်​များ at ​တေး​ရေး ဆို ထူးအိမ်​သင်​ နာရီသံ​တွေ ဆူညံလွန်းတယ်​ ရင်​ခုန်​သံ​တွေမြန်​တယ်​ အချစ်​​ရေ ငိုချင်​ပါတယ်​ ​မျော်​လင့်​ခြင်း​တွေ တို့​တွေဒီ​အချိန်​ဟာ​ နောက်​ဆုံးလား နူတ်​ဆက်​လိုက်​ဖို့ အားတင်းထားရင်း ပါးပြင်​​ပေါ်မ (3.35)
တကယ်ပဲလည်း နင် မချစ်ပဲနဲ့ ချမ်းချမ်း (4.87)
မင်းပြန်ခဲ့ပါ at မင်းပြန်ခဲ့ပါတော့ ငါ့မှာ မင်းမရှိမဖြစ်လို့ အလင်းရောင်မဲ့နေတဲ့အခန်းမှာ ငါ့တစ်ယောက်တည်းမို့ နှစ်ယောက်တစ်အိပ်မက်တွေလည်း တစ်စစီကွဲပျက်ကာ ငါရူးးးသွပ် (3.30)
တသက်လုံးချစ်ခွင့်ရှိတယ် လင်းနစ် (4.17)
နင်​လိုမယ်​ဆို ချခင်းထားတယ်​ နင်​ယုံကြည်​စွာဖြတ်​နင်းလိုက်​ အချစ်​ဟာ ငါ့အတွက်​ ဓားသွား​ပေါ်ကပျားရည်​စက်​လိုဖြစ်​​နေလဲ ငါမမှုတယ်​ မင်း အဆင်​​ပြေပါ့မလား စိတ်​ပူတယ်​ မင်း ဒီချိန်​တစ်​​ယောက်​တည်းရှိေ​နချိန်​ ​မင်း ​ချောင်​မှာတစ်​​ယောက်​တည်းကြိ (3.88)
V1 : မေရယ် အထင်တော့ မလွဲလိုက်နဲ့ဦး စာလွှာများ မရောက်လာခဲ့ရင် မောင့်အပေါ်မှာ မငြိုငြင်ပါနဲ့နော် အကိုတို့စစ်သားဘဝဟာ ချစ်သူကိုလွမ်းဖို့ရာ တစ်ခါတလေ အချိန်တော့မပေးနိုင်ပါ တောတောင်ကို ကျော်ကာဖြတ်လို့ တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းလို့ ကျောပိုးအိတ်ကိုလွယ်ကာ ဒါတွေကိုတောင်ြ (4.39)
ပင်တိုင်စံအတွက် အချစ်ရဲ့အလင်းရောင် ချမ်းချမ်း နေနေ (4.75)
- En Yeni Pop Müzik Şarkılar
- Yeni Şarkılar Cepten indir
- Cepten müzik indir
- Mp3 Indir Bedava
Son Aramalar mixs:
Roman Hovasi / Dıle Be / Nigar Muharrem / Dıle Rezil / Gözlerin Aklıma / Mc Karakule / Hani Sevdiğini /
လြော့ကွိုးကုနျခြိနျ စိုငျးထီဆိုငျ mp3 indir ,bedava mp3 indir , dinle , yeni müzikler En son mp3ler
Yerli Yabanci şarkılar , Şarkı Sozleri , Hit mp3 ve Her tur muzik listesi , 2015 , yeni mp3ler indir, albüm indir, mobil mp3 indir, şarkı indir
© mp3.ezizim.biz Music Is Life